Abenzi bekhadi le-Rfid - Abathengisi baseChina beRfid & Factory
Ikhadi le-rfid le-13.56Mhz HF
Amakhadi we-rfid we-13.56Mhz HF alandela i-ISO 14443A ne-ISO 15693, umthetho olandelwayo we-ISO14443B. Banosayizi omkhulu we-EEPROM, ukuphepha okuphezulu futhi amakhasimende angabhala usuku kuzo zonke izigaba namabhulokhi. Kusetshenziswe ukufakwa okuningi.
Ikhadi le-rfid le-125khz LF
UMIND unikeza i-EM4305, EM4200, EM4100, TK4100 (iyahambisana ne-EM4100 chip), i-ATMEL T5577 namakhadi ahambisanayo we-HID 125KHZ LF Smart RFID, ikakhulukazi ama-LF Smart RFID Cards afundwa kuphela njengo-EM4100, TK4100 njll. Kepha i-ATMEL T5577 ne-HID 26bits ne-HID 37 amabhithi angafunda futhi abhale kabusha idatha ngaphakathi.
Ikhadi le-rfid frequency / ikhadi le-Hybrid
Ikhadi le-rfid lemvamisa emibili luhlobo lwekhadi lokungeniswa elihlakaniphile elinobuchwepheshe obuphezulu nemisebenzi ephelele. Inhlanganisela yekhadi lemvamisa eliphansi, ikhadi lemvamisa ephezulu nekhadi le-UHF laziwa nangokuthi ikhadi lemvamisa eliphindwe kabili. Isetshenziswa kakhulu emabhange, ezikoleni nakwezinye izindawo.
Ikhadi leFudan F08
Ikhadi le-Fudan F08 liqukethe i-fm11rf08 chip, i-antenna nesisekelo samakhadi; ayithwali amandla kagesi; ithola amandla kumfundi ngokusebenzisa i-antenna ukuze isebenze, futhi ukuxhumana nomfundi kutholwa ubuchwepheshe bemvamisa yomsakazo.
Ikhadi le-Mifare lisebenzisa i-chip yokuqala ye-NXP, njenge-NXP mifare classic 1k s50, NXP mifare classic 4k s70, NXP mifare Ultralight ev1, NXP mifare Ultralight c, NXP mifare Desfire 2k / 4k / 8k ev1, NXP desfire 2k / 4k / 8k ev2 and I-NXP mifare plus 2k / 4k njll.
I-NFC ubuchwepheshe bokuxhumana obungenantambo obuhlinzeka ngokuxhumana okulula, okuphephile nokusheshayo. Uma kuqhathaniswa ne-RFID, i-NFC inezici zebanga eliseduze, umkhawulokudonsa ophakeme nokusetshenziswa kwamandla okuphansi.
Ikhadi le-RFID clawshell
Iningi lekhadi le-RFID clawshell likumvamisa ye-125Khz futhi ine-Atmel chip: T5577 noma i-E-Marine chip: EM4100, siphinde sibe nezinketho ezingafinyeleleka ze-chip njengamakhadi we-TK4100 clawshell uma kudingeka ikhasimende.